DHEGEYSO-Xildhibaan Shaacuur oo kahadlay Isbedelka maamul ee gobolka Mudug iyo Xariga Daljir. – Radio Daljir
Luulyo 4, 2016 8:00 b 0
(July 04 2016)-Xildhibaan Cabdikariin Xuseen Guure (Shaacuur), oo kamid ah golaha wakiilada dowladda Puntland oo waraysi gaar ah siiyey Radio Daljir ayaa si qotodheer uga hadlay isbedelka maamul ee madaxweyne Gaas ku sameeyey maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Galkacyo.
Xildhibaan Shaacuur ayaa sheegay in isbedelkaani uu kusoo beegmay xilli xaaladda gobolka ay u baahnayd isbedel lagu sameeyo, haseyeeshee maamul labedelo uusan waxba soo kordhinayn haddii aysan xukuumadda madaxweyne Gaas qorshe cad la imaan.
Dhanka kalena xildhibaanka ayaa waxa uu ka hadlay tallaabada sharci darrada ah ee ay Idaacadda Daljir ku xiran tahay maalintii 12aad, wuxuuna tilmaamay in idaacaddu ay ku xiran tahay ogaal madaxweyne loona baahan yahay inaan lagu tuman tastuurka Puntland.
Cabdifataax Cumar Geeddi oo kusugan xarunta Daljir ee magaalada Garoowe ayaa xildhibaanka waraystay ugu horayna waydiiyey aragtidiisa isbedelka maamulka gobolka Mudug.